Izindaba - Uyini umehluko phakathi kweziguquli zohlobo lukawoyela kanye neziguquli zohlobo olomile?
1. Imvelo ehlukile
1. Isiguquli sohlobo lwamafutha: uhlobo olusha lwe-transformer esebenza kahle kakhulu enesakhiwo esinengqondo nokusebenza okungcono.
2. Ama-Dry-type transformers: ama-transformer ama-iron cores nama-windings awagxili kumafutha avikelayo.
Okwesibili, izici zihlukile
1. Izici ze-transformer yohlobo lwamafutha:
(1) Ama-transformer ohlobo lukawoyela ngokuvamile asebenzisa izindlela ezintathu zokupholisa: ukuzipholisa ngokucwiliswa uwoyela, ukupholisa umoya ocwiliswe uwoyela kanye nokujikeleza kukawoyela ngempoqo.
(2) Ama-transformer ohlobo lukawoyela asusa ukushisa ngokusebenzisa uwoyela wemvelo.Isistimu yokupholisa umoya ecwiliswe uwoyela isekelwe ohlelweni lokuzipholisa olucwiliswe uwoyela, lwengeza isiphephetha-moya sokuvuthela umoya ethangini likaphethiloli kanye nepayipi likawoyela ukuze kuthuthukiswe umphumela wokulahla ukushisa.Ukujikeleza kwamafutha okuphoqelekile ukupompa uwoyela oshisayo ku-transformer ngaphandle kwe-transformer ukuze uphole, bese uyithumela ku-transformer.
2. Izici zesiguquli sohlobo olomile:
(1) Iphephile, ingashi futhi ayingcolisi, futhi ingasebenza ngqo endaweni yokulayisha;
(2) Yamukela ubuchwepheshe obuthuthukisiwe basekhaya, amandla aphezulu emishini, ukumelana okuqinile kwesiyingi esifushane, ukukhipha okuncane okuyingxenye, ukuzinza okuhle kokushisa, ukwethembeka okuphezulu kanye nempilo ende yesevisi.
(3) Ukulahlekelwa okuphansi, umsindo ophansi, umphumela osobala wokonga amandla kanye nokungakhathalelwa;
(4) Ukusebenza okuhle kokukhipha ukushisa, umthamo oqinile wokugcwala ngokweqile, kanye nokwanda kokusebenza kwamandla ngesikhathi sokupholisa umoya ngempoqo;
(5) Ukumelana nomswakama okuhle, kulungele izindawo ezinokhahlo njengomswakama ophezulu.
Idivayisi yokuvikela i-microcomputer eshintshashintshayo yohlobo olomile isebenzisa ubuchwepheshe bamazwe ngamazwe obuthuthukisiwe be-DSP kanye ne-surface mount kanye nobuchwepheshe bebhasi lasendle (CAN), obuhlangabezana nezimfuneko zamaleveli ahlukene kagesi wesiteshi esincane futhi eqaphela ukuhlotshaniswa, ukwenziwa kwedijithali kanye nobuhlakani besiteshi.
Ama-transformer ohlobo olomile angaqedela imisebenzi yokuvikela isiteshi esincane, ukulinganisa, ukulawula, ukulawula, isignali, ukuqoshwa kwamaphutha, ukutholwa kwamandla, ukukhethwa kolayini ophansi wamanje, ukucisha umthwalo owumjikelezo ophansi, njll., ukuze izidingo zobuchwepheshe, imisebenzi kanye izintambo zangaphakathi zomkhiqizo zisezingeni eliphezulu.I-transformer yohlobo olomile isebenzisa isilinganiso sokuvikela esisabalalisiwe kanye nedivayisi yokulawula, engafakwa phakathi nendawo noma ihlukaniselwe indawo, futhi ukulungiselelwa kungashintshwa ngokungenasisekelo ngokuya ngezidingo zomsebenzisi ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zezinhlelo ezahlukene.